Deeq macawino ah oo looqaybiyay dadka nafada ee ku nool Degmada Dhuusamareeb. – SBC
Deeq macawino ah oo looqaybiyay dadka nafada ee ku nool Degmada Dhuusamareeb.
Dadkaan waxaa yihiin ay mudooyinkaan danbe ay haysatay xalad adag oo dhanka noloshaa manajirin wax cawinaad oo ay heleyn inta lagu guda jiro bishaan barakaysan
Waxaa ay dhibaato adag ay kahaysataa helitaanka wax yaabihii ay ku afuri ama suxuuran lahaayeen .
Dadkaan qaarkood waxaa kamaqan lugaha kuwana gacmaha iyo kuwo aan indho lahayn
Waxaa ay isugu jiraan rag dumar iyo caruur yar yar waxaa ay inta badan ku nafoobeyn dagalada aan dhamadka lahayn ee kajira gudaha dalka somalia mudo aad u dheer
Dadkaan waxaa deeqdaan usoo diray qaar kamid ah jaaliyada somaliyeed ee kunool dalka Denmark waxaana dadka uqaybiyay madaxa ururka saahid ee gobolka galgaduud Dr,ahmed mahdi mohmed.
Waxa ay deqdaan isugu jirtay lacag cadaan ah nuucyada rashinka qaybo kamid ah sida ganley digir iyo sonkor waxaa ay kusoo begantay waqti ay aad uliitada xalada nololeed ee dadka nafada ee kunool degmada dhus-mareeb oon inta badan helin wax cawinaad ah.
Afhayenka nafada ee degmada dhus-maree cali cabdilaahi abti doon ayaa wxaa uu shegay in ay aad ugu faraxsanyihiin deeqdaan oo ay heleyn waxaana uu intaas kudaray in ay bulshada somaliyeed ay kadoonayaan gurmad silooga samata bixiyo xalada adage e dhanaka nolosha ee haysta .
Ugu danbeyntii dadkaan curyaanka waxaa ay ubahan yihiin in ay helaan cawinaad buuxda sigaarna waxa ay ucodsadeyn in looga cagan siiyo dhanka wax barashada Iyo in shaqo abuur loo sameeyo si ay nolol maalmoodka usoo dhacsadaan .